Inkambo yokuthuthuka kanye nomkhuba wesikhathi esizayo wobuchwepheshe be-membrane ekusetshenzisweni kabusha kwemithombo yamanzi angcolile-izindaba ze-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Inkambo yokuthuthuka kanye nomkhuba wesikhathi esizayo we-membrane technology ekusetshenzisweni kabusha kwemithombo yamanzi
Isikhathi: 2020-04-13 Hits: 47
Ekuqaleni kuka-2000, ukugxila embonini yokwelashwa kokukhucululwa kwendle kwaqala ukuguqukela ekuthuthukisweni kwekhwalithi yamanzi, futhi isidingo sethekhnoloji ye-membrane sakhula ngokushesha. Imboni enkulu iGreater Electric yase-United States yasebenzisa amadola angama-760 ezigidi zaseMelika ngonyaka we-2006 ukuthola iZenon mazingira Inc. ukuthola ubuchwepheshe bayo be-microfiltration / ultrafiltration membrane bese ingena ezimakethe zokwelapha indle. Ama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-3.2 athengise ibhizinisi lakhe lokwelashwa ngamanzi kwi-SUEZ.
I-Shuihuan Technology, umhlinzeki we-MBR osezingeni eliphakeme eChina, ibamba ngokuqinile inkambiso yokuthuthuka kobuchwepheshe be-membrane futhi ithole ukuthuthukiswa okusheshayo kwebhizinisi ngokusebenzisa ukusungulwa kobuchwepheshe okuqhubekayo. Kuthathe iminyaka eyishumi kuphela ukusuka ekumisweni kuya ohlwini. Eminyakeni yamuva nje, ngokuthandwa komqondo wokuphinda usetshenziswe kabusha komhlaba wokukhuculula indle nokwazisa kwezitshalo zamanzi ezinengqondo, ubuchwepheshe bezokwelapha indle buye baveza enye into entsha kanye nenguquko. Kulokhu okusha, ubuchwepheshe be-membrane buzohlala buwukhiye.
Ukubuka konke ukuthuthukiswa kobuchwepheshe be-membrane
Kodwa-ke, ngemuva kweminyaka ecishe ibe ngu-30 yentuthuko, ubuchwepheshe be-membrane buhlangane nama-botnecks, futhi izinkinga ezinjenge-membrane fouling, izindleko zokusebenza kanye nempilo ye-membrane sezivelele. Ngo-2014, isizinda sokuqala sokuphathwa kokukhucululwa kwendle komasipala baseNetherlands eNetherlands sakhetha ukucisha ngemuva kweminyaka engu-8 sisebenza, okwadala ukushaqeka embonini. Izindleko nokusebenza kwaba yinto okugxilwe kuyo embonini, futhi ukusungulwa kwezobuchwepheshe kwakuseduze.
Ngasikhathi sinye, umqondo wokulashwa kwendle usushintshile emazweni ahlukahlukene. Izitshalo zokwelapha indle zishintshile zasuka emizini egcina ukusetshenziswa kwamandla ziya eziteshini zokuphinda zisebenzise izinsiza kusebenza, futhi namabhizinisi okuphatha amanzi nawo aguqukile esuka kubathengi bamandla bokuqala aba ngabakhiqizi bezinsizakusebenza. Ngaphansi kwalesi simo esikhulu, hlobo luni lobuchwepheshe bolwelwesi olungafinyelela isidingo? Mhlawumbe kungumbuzo ukuthi wonke udokotela wezobuchwepheshe we-membrane kudingeka acabange ngawo.
Izindawo ezintathu ezinkulu zokusebenzisa ubuchwepheshe be-membrane
Inqubo kamasipala yokuhlanza amanzi amponjwana-i-membrane bioreactor (MBR)
I-membrane ye-Microfiltration (MF) ne-ultrafiltration membrane (UF) isetshenziswe ngempumelelo kwinqubo yokwelashwa kokukhucululwa kwendle kamasipala we-MBR, ubukhulu be-membrane pore buphakathi kuka-0.02-0.4 μm, okubonakalayo kwe-membrane ikakhulu kusetshenziswa i-PVDF, futhi ukuhlelwa kwe-membrane kusetshenziswa ngokuyinhloko umbandela we-membrane oyize Noma ifilimu elisicaba. Ngokwezibalo, kusukela ngonyaka we-2017, kunezitshalo ezingaphezu kuka-200 ze-MBR zokuhambisa indle zamanzi omhlaba ezinamathani angaphezu kwe-10,000 eChina. Kulindeleke ukuthi uma kuphela unyaka ka-2018, umthamo wokwelapha oqoqekile wohlelo lwe-MBR eChina ube usuphakama ngamathani ayizigidi eziyi-14 ngosuku. Ekujuleni, leli nani lisakhula ngokushesha okukhulu.
Abathengisi bezimakethe ze-MBR ikakhulukazi bafaka i-SUEZ, Mitsubishi, Bishuiyuan, Asahi Kasei, Tianjin Membrane, njll. Eminyakeni eyishumi edlule, izinkampani zaseChina ezimelwe yiBishuiyuan zinake ucwaningo oluzimele kanye nentuthuko, ngokunqamula kwizithiyo zobuchwepheshe zamazwe ambalwa athuthukile, futhi usenolwazi nezindlela ezisezingeni eliphezulu kakhulu zokulungiselela ukwakhiwa kwe-membrane ye-MBR. Ngamaphrojekthi we-24 MBR, sekuyinkampani enenombolo enkulu kakhulu yamaphrojekthi we-MBR emhlabeni.
Imodyuli ye-membrane ye-MBR
Okwedlule: Ukwethulwa okufushane kwe-membrane bioreactor
Okulandelayo: Ukwethulwa kwenqubo ye-MBR yobuchwepheshe bokwelashwa kwendle